Ururka Jaamacada Carba oo soo dhaweeyay Qorshayaasha Dawlada Somaliya | maakhir.com
Ururka Jaamacada Carba oo soo dhaweeyay Qorshayaasha Dawlada Somaliya
January 12, 2008 in Somalia
Caira:- Ururka Jaamacada Carbta ayaa sheegay inuu aad u soo dhawaynayo Xukuumada Cusub ee uu dhawaan soo yagleeyay Raisalwasaare Nuur Cadde,waxay sheegeen Ururka Jaamacada Carbtu inay aad ugu riyaaqayaan Xukuumada Cusub ee Dalka Somaliya iyaga sheegay inay aad ula shaqaynayaan, ayna la garab taagan yihiin Taageera Buuxda.
Mas`uulka Jaamacada Carabta u qaabilsan arimaha Soomaaliya Samiir Xusni ayaa tibaaxay in ay ku rajo weyn yihiin in xukuumadaani abuurto jawi dalka u saamaxaya deganaasho lagana gudbo Dagaaladii dalka dib u reebay sanooyinka dheer.
Waxa uuna intaa raaciyay n jaamacada Carabta diyaar u tahay in ay xooga saarto sidii loo gacan qaban lahaa xukuumadaani si ay uga mira dhaliso dadaalada dib u hishiisiinta ee uu dhawaan sheegay inuu muhiimada saarayo Nuur Cadde.
Mr Samiir waxa uu xusay in xukuumada Cusub looga baahan yahay inay xooga saarto sidii ay isugu keeni lahayd Mucaaradka iyo Dawlada, si loo helo Dad Midaysan.
Samiir Xusni ayaa waxa la sheegay inuu dhawaan booqan doono Dalka Somaliya gaar ahaan caasimada dalka ee Muqdisho, halkaasi oo uu u tegi doono sidii uu u soo qiimayn lahaa xaalada Guud ee ka jirta Dalka Somaliya.
Wararkale ayaa sheegaya iyana in Booqashada Samiir Xusni ay Gol Gol xaadh u tahay safar uu isana ugu soo jeedo Dalka Xooghaya Guud ee Jaamacada Carbta Caamir Muusaa.
Isku soo wada Duuboo Xukuumada Cusub ee uu dhawaan soo yagleelay Nuur Cadde ayaa Noqotay mid beesha Caalmka oo idili ay soo dhawaysay.
« Nuur Cadde oo Muqdisho ku soo Foole
Lacagtii Dibu dhiska Dekeda Laasqoray oo si toos ah London uga bilaabtey [Sawiro] »